ကိုရုပ်ဆိုး ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: October 2008
မရေမရာ အိပ်မက်နှင့် ကျနော်
ပေး မုန့်ပုံး ... ရော့ မုန့်ဖိုး
သီတင်းကျွတ်ပြီ ... ကိုရုပ်ဆိုးကြီး ဘာလုပ်နေသလဲ ???...
အချစ်, Love, l’amour
ဖြစ်သလိုလား ... ဘာမှမဖြစ်သလိုလား ... စားလိုက်တာပဲ
အသိလွယ် - အကျင့်ခက်
ပီတိ တစ်ထုပ်ရယ် ... ငါးတစ်ကောင်ရယ် ... ကိုရုပ်ဆိုး...
ညီငယ် မောင်မျိုးလေး TAG ထားတယ်ဆိုလို့ ဘာများလဲလို့ မေးခွန်းတွေ စုံနေအောင်မေးထားတာဗျို့၊ မဖြေမှာစိုးလို့နဲ့တူတယ် ... အကိုရုပ်ချောရေ ဖြေပေးပါတဲ့.
ကဲ မေးခွန်းလေးများအား ပြန်လည်ဖြေကြားထားပါတယ် ညီငယ်မောင်မျိုးရေ ....။
မေး ..........အကိုရုပ်ချော (တဂ်ခံရတဲ့သူ ) နဲ့ မောင်မျိုး (တဂ်တဲ့သူတို့) ဘယ်လိုများ ဆက်ဆံပတ်သက်လည်း မသိဘူးနော်
ဖြေ........... ဖအေမတူ၊ အမေကွဲ ကျနော့ ညီ ဘလော့ဂါလေးပါ ။
မေး..........သူ့အပေါ် အကို့ရဲ့ထင်မြင်ချက် ၅ ချက်လောက်ပြောပြပါလား ?
၁) ခပ်ငယ်ငယ် နဲ့ ဘ၀ပင်လယ်ကို ဇွဲမာန်အပြည့်နဲ့ ကန့်လန်ဖြတ်ကူးနေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်။ (ဒီနေရာမှာ ဘ၀ပင်လယ်ကို ကန့်လန်ဖြတ်ကူးတယ်ဆိုတာ ဒီရေပဲတက်တက်၊ ဒီရေပဲကျကျ ကန့်လန့်ဖြတ်ကူးတဲ့သူဆိုတာ အားမလျော့ပဲ ဇွဲနဲ့ကူးရတာကိုဆိုလိုတာပါ။ ပုံမှန်ကတော့ ဒီရေကျရင်မျှောလိုက်လို့ရတယ်လေ…)
၂) တခါတရံ လောကကြီးကို ပေါက်ကွဲပြီး ဘလော့ဂ်မှာ အံဖတ်တွေကို သွန်ချတတ်တဲ့ …၊ တခါတရံမှာ လာလည်တဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါအပေါင်းကို ပျော်ရွှင်စေတတ်တဲ့ ကောင်ကလေးတစ်ယောက်။
၃) အချစ်နဲ့ပါတ်သက်ရင် သိနားသလိုလိုနဲ့၊ တကယ်တမ်း မသိသေးတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်။
၄) အကို့နဲ့ တွေ့ရင် ဘီယာတိုက်မယ်လို့ အမြဲပြောတတ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်။
၅) မိသားစုကို အမြဲတမ်းလွမ်းဆွတ်သတိရနေတဲ့ ဘ၀ပင်လယ်ထဲက ကမ်းကို မပြန်နိုင်သေးတဲ့ လှေငယ်လေးတစ်စင်းနှင့်တူသော ကောင်ကလေးတစ်ယောက်။
မေး....အမှတ်တရ အဖြစ်ဆုံး အကို့အတွက် လုပ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အရာလေးများရှိလား ?
ဖြေ..... အမှတ်တရ အဖြစ်ဆုံးတော့ မလုပ်ပေးဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် အမှတ်တမဲ့နဲ့တော့ ကျနော့ ဘလော့ဂ်ကို လည်တတ်တဲ့လူမဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်။
မေး......အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံး သူပြောခဲ့တဲ့ စကား ?
ဖြေ.... အကိုနဲ့တွေ့ရင် ဘီယာတိုက်မယ်တဲ့ :) နောက်တစ်ခုက သူ့ပို့စ်မှာတင်ထားတဲ့ ဒီကဗျာလေးထဲက အပိုဒ် (၆)ကနေစပြီးကြိုက်တာ။ အဲဒီထဲကမှ “ဒီနေရာမှာ အမှန်တကယ်ရှိနေတာဆိုလို့ ၊ ရိုးသားမှုတစ်ခုနဲ့ရှင်သန်နေရတဲ့ တောသားအရိုင်းစိုင်းတစ်ကောင်ပဲရှိပါတယ်.........။”
မေး.........သူသာ အကို့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ရင် ဘာလုပ်မလဲ ?
ဖြေ.... ချစ်သူဖြစ်ပြီးမှတော့ တောင်းရုံပေါ့ (လက်ထပ်ခွင့်လေ …:) ဒီလိုနူးညံ့တဲ့လူမျိုး ဘယ်အလွတ်ခံလို့ဖြစ်မလဲ … :P
မေး.....အကို့ချစ်သူသာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ဘက်က ဘာတွေ ပြုပြင်ဖို့လိုမယ်ထင်လဲ ?
ဖြေ.... သူကသာ ကိုယ့်အကျင့်စရိုက်တွေကို မပြင်ခိုင်းရင် တော်ပါပြီဗျာ ….
မေး.........သူက အကို့ရန်သူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရော ?
ဖြေ......... ရန်သူငါးပါးထဲမှာ အင်မတန်ဆိုးဝါးလှတာ သူခိုးဓားပြထက်ဆိုးတဲ့ ရန်သူဟာ ဤဇမ္ဗူတစ်ခွင်မှာ မောင်မျိုးသာဖြစ်လို့ကတော့ ကြောင်တောင် အနားမဖြတ်လျှောက်စေရဘူး ….
ဖြေ.... အကြောင်းအရင်းသိမှတော့ ရန်သူဖြစ်နိုင်ချေ နည်းသွားပြီလေကွယ် …
မေး.... သူ့အတွက် အကို ဆန္ဒအရှိဆုံး လုပ်ပေးချင်တာလေးများရှိလား ?
ဖြေ.... သူဖြစ်ချင်တာလေးတွေကို နှုတ်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း တတ်နိုင်သ၍ …
မေး..... သူ့အပေါ်ခြုံငုံပြီး သုံးသပ်ကြည့်ရင် ဘယ်လိုမြင်လဲ ?
ဖြေ.... ဒီနေရာမှာ ပြောစရာတစ်ခုရှိလာပြီ … ခြုံငုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင် … အင်း … ကောင်လေး ဘယ်လိုဖြေရင် ကျေနပ်မလဲ …. အကို့ကို အီးမေးလ်ပို့လိုက်
မေး..... ( တကယ်ကို ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ ) အကို့အပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုရော ဘယ်လိုမြင်လဲ ?
ဖြေ.... ဟာကွာ … ဘာပြောကောင်းမလဲ .. ကမ္ဘာကို ကျော်တာဆိုတော့ ဘေးကကြည့်တဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်က ထင်းခနဲ မြင်သွားကြတယ်နဲ့တူပါတယ် … ဘာတဲ့ …. X@#$^&%
မေး... အကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်မိတဲ့ အကို့ရဲ့ characteristic လေးပြောပြပါလား ?
ဖြေ... အကို့မှာ ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာက မရှိသလောက်ပါ။ ကျေနပ်မိတာကတော့ အများအားဖြင့် အကိုနဲ့ စကားပြောပြီးတာနဲ့ အကိုကို့ ခင်သွားကြတာကို ကျေနပ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ့ အကို မသိဘူး။
မေး.... ဒါဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမုန်းဆုံး characteristic လေးကရော ?
ဖြေ.....အားနာမှု၊ ခင်တွယ်မှု၊ လောဘမကြီးမှု အဲဒီ လက္ခဏာတွေကို မုန်းတယ်။
မေး....ကိုယ်အဖြစ်ချင်ဆုံး လူစားမျိုးက ဘယ်လိုလဲ?
ဖြေ.... ဘယ်လိုလူစားမျိုးက ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ လေ့လာနေတုန်းဆိုတော့ …???
မေးးး ...အကို ချစ်ခင်ဂရုစိုက်တဲ့လူတွေကို ဘာများပြောချင်ပါလဲ ?
ဖြေ... အေးဆေးပေါ့ … ဘ၀မှာ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ပဲ ရိုးသားတာ အကောင်းဆုံးပဲ …..။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား2:54 PM 1 ထင်မြင်ချက်(များ)
ဘယ်မှာလဲ၊ ဘယ်တော့လဲ …။
ငါ, မှေးစက်နေရအုံးမှာပါလား …။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား4:22 PM5ထင်မြင်ချက်(များ)
ကဲ ... ကဲ ... သီတင်းကျွတ်မှာ လာရောက်ကန်တော့ကြတဲ့ ကျနော့ ညီငယ်, ညီမငယ်များကို သီတင်းကျွတ်မှာ သုံးဖို့ မုန့်ဖိုးပေးရမှာပေါ့ ....။ အကုန်လုံးကလည်း USD မှဆိုတော့ အောက်မှာ စိတ်ကြိုက်သာ ယူသုံးကြဗျာ ..။
အိမ်မှာက USD ဆိုတာ ဒီလို သုံးနေကြဗျ :) :P အဲဒီတော့ ငါ့ညီ, ငါ့ညီမတွေ အားမနာတမ်းယူသုံးကြ။
ကဲ .. ဆုလည်းပေးလိုက်မယ်။ အပျိုမ ညီမလေးများ ကိုအောင်မင်းအောင်နဲ့ ပေါင်းရပါစေ ...။
ငါ့ညီ လူပျိုများ ကိုအောင်မင်းအောင် ညီမနဲ့ ညားကြစေဗျား ...။း)
ပုံတွေကို Google ကနေ ရှာပြီးတင်ထားတာ။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား2:42 PM7ထင်မြင်ချက်(များ)
သီတင်းကျွတ်ပြီ ... ကိုရုပ်ဆိုးကြီး ဘာလုပ်နေသလဲ ???
သတိးငယ်ငယ်က ကလေးကဗျာရွတ်သလို ရွတ်ကြည့်ပါလား။
စောင့်နေသူ လူပျို၊ အပျို လေးများ
လက်ဖွဲ့လျော့ရင် မကောင်းပါ ....။
ခြင်္သေ့လေးများ ခုန်ထွက်ကုန်တော့သည် ...။
လူပျိုလှည့်မည့်သူများ ဒီည လာလိမ့်မည် ...။
ကြိုတင်၍ ၀ယ်လှောင်ထားကြသည် ...။
ရင်နာနာနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ ...။
ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဓနိတဲများရှိသည် ...။
ဗျောက်အိုး ဖောက်သူများ အရေးယူမည်
ရဲစခန်းဝင်းထဲ ဗျောက်သံညံကြတော့မည် ...။
ဒါမှ လိမ့်ပါတ်လည်မည် ဖြစ်ပါသည် ...။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား4:28 PM5ထင်မြင်ချက်(များ)
ပြင်သစ်ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာ “ဗစ်တာဟူးဂိုး” (Victor Hugo) ကပြောတယ် …
အချစ်ဆိုသည်မှာ “ပြည့်စုံခြင်း၊ အတိုင်းအဆမဲ့” ဆိုပေမယ့် …
လူတစ်ယောက်ထံ အချစ်ဆိုတာ စတင်မိတ်ဆက် သိကျွမ်းလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ သူ့ဘ၀ထဲသို့ “လှို့ဝှက်မှုတွေ၊ စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေ” ၀င်ရောက်လာတတ်တယ် တဲ့။
အချစ်ဆိုတဲ့အရာက ဘ၀မှာ ရှိသင့်တဲ့ “အပေါင်းအသင်း၊ ဆွေမျိုး နဲ့ ကန့်သတ်ချက်” ဆိုတဲ့အရာတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် နေရာလွတ်ရှိလောက်အောင် မကြီးမားလို့ပါတဲ့ ….။
ပြင်သစ်စာရေးဆရာ “ပေါ လေအိုးတိုး” (Paul Léautaud) က ဒီလို ဆိုထားသေးတယ် ...
“လက်ထပ်ခြင်းမှာ အချစ်က မပါမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာ၊ လုပ်ရမယ့်အရာတဲ့ ... ဒါပေမယ့် ချစ်ခြင်းမှာတော့ အချစ်သာ လိုတယ်”တဲ့ (၂)
အချစ်ကို အတန်းအစားအမျိုးမျိုး၊ အလွှာအမျိုးမျိုကလူတွေ သူ့ဘ၀နှင့်ထင်ဟပ်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေကို အမျိုးမျိုး ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြတာ ယနေ့အထိပါပဲ …။ အချစ်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ မဆုံးနိုင်တဲ့ ပုံပြင်တွေ၊ ခံစားချက်တွေ၊ အခြေအနေတွေ အမျိုးမျိုးကို တွေ့ဆုံကြုံတွေ့ဖူးကြတယ်။ ဖတ်မှတ်ဖူးကြတယ်။ ခံစားဖူးကြတယ်။ အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ ? ဘယ်နေရာက ထွက်လာပြီး … ဘယ်နေရာကို ၀င်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားကြလဲ … အချစ်မှာမွေးဖွားခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း ရှိသလား …. မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ရှိသလို၊ အဖြေပေါင်းများစွာလည်း ရှိခဲ့ကြတယ်။ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ် ယူဆထားကြပေမယ့် …. ကျနော့အတွက် အချစ်ဆိုတာကတော့
“ချစ်နေသူနှင့် အချစ်ခံရသူ နှစ်ဦးတည်းသာ ခံစားနားလည်လို့ရတဲ့ အရာဝတ္ထု သေးသေးလေးတစ်ခုပါ။”
လူတွေက ၅၂၈ အချစ်က အေးမြတယ်၊ ၁၅၀၀ အချစ်က ပူလောင်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ကျနော့အတွက်တော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို ၅၂၈ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၁၅၀၀ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အေးမြခြင်း ပူလောင်ခြင်းတွေကို ချစ်နေသူနှင့် အချစ်ခံရသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ်မှာသာ သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။
အချစ်ဆိုတာ နက်နက်နဲနဲ အဓိပွါယ်ဖွင့်ဖို့ အင်မတန်ခက်တဲ့ စိတ္တဇနာမ်လေး တစ်ခုပါ။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ တချို့ကိစ္စတွေက အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လေလေ ရလဒ်က ဆိုးကျိုးများလေလေပါပဲ။ အချစ်နဲ့ တွေ့ခဲ့ဖူးသူကော … အချစ်ကို တွေ့ဖို့ကြိုးစားနေသူကော … ကျနော် မှာချင်တာက “ချစ်ပါ၊ အချစ်ကြီး ချစ်ပါ၊ အဓိပ္ပါယ်မဖွင့်ပါနဲ့”
(၁) : L'amour, c'est l'absolu, c'est l'infini ; la vie, c'est le relatif et le limité. De là tous les secrets et profonds déchirements de l'homme quand l'amour s'introduit dans la vie. Elle n'est pas assez grande pour le contenir. Victor Hugo
(၂) : Dans le mariage, on fait l'amour par besoin, par devoir. Dans l'amour, on fait l'amour par amour.Paul Léautaud
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ3း:44 PM3ထင်မြင်ချက်(များ)
ဖြစ်သလို စားသောက်ခြင်း ... (ညီငယ်မဟုတ်တဲ့) ညီမငယ် နန်းညီ က TAG ထားတာလေးကို ဖြေရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ...
ဟိုး .. လွန်ခဲ့သော, ငယ်ငယ်ကအကြောင်း ပြန်ပြောင်းပြောဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။ အမေ ခရီးသွားခါနီးတိုင်း မှာတတ်တဲ့, ပြောတတ်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းက “ငါ့သားအတွက် စိတ်မပူရဘူးတဲ့၊ သူက ဖြစ်သလို စားတတ်တယ်တဲ့”။
ကျနော် ... ငယ်ငယ်က အစားအသောက် ဂျေးမများတတ်ဘူး။ ဘ၀မှာ အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ မရှိသလို၊ အမုန်းဆုံး အစားအစာလည်း မရှိပါ။ အဲ ... အဲဒီမှာ တစ်ခုဖြတ်ပြောရဦးမယ် ... ငယ်ငယ်က ကျနော်တို့အိမ်နားမှာ အသုတ်ရောင်းတဲ့ “ခါလာကြီး” အသုတ်ကိုတော့ စွဲစွဲလမ်းလမ်းစားမိတယ်။ အခုထိ ခေါက်ဆွဲနဲ့ ထမင်းသုတ်ကို နှစ်ခြိုက်မိတုံးပဲ။ အကြိုက်ဆုံးအစားအစာတော့ မဟုတ်ဘူး။
လမ်းသွားရင်းနဲ့ ဗိုက်ဆာရင် အကြော် (သို့) ငှက်ပျောသီး စားလိုက်တယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ရေခဲရေပေါ့နော် .. အဲဒါသောက်လိုက်တယ်။ လက်ရှိကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်စလုပ်ခါစက မြန်မာ့လေကြောင်းမှာ ဧည့်သည်တွေအတွက် လေယာဉ်လက်မှတ်သွားဝယ်ရတယ်။ တနေကုန် အဲဒီရုံးမှာပဲ နေရတာ။ ကမ်းနားလမ်းက မြန်မာ့လေကြောင်းရုံးချုပ်မှာပေါ့။ အိမ်က စသွားကတည်းက အဲဒီရုံးကို အရင်သွား လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတင်, ပြီးရင် ခဏအချိန်ရတဲ့အခါ ပန်းဆိုးတန်း စာအုပ်အဟောင်းတန်းသွား၊ လိုအပ်တဲ့စာအုပ်တွေဝယ်၊ စာပေဗိမာန်ကိုဝင် .. စာအုပ်တွေဝယ်၊ နေ့လည် ဗိုက်ဆာတဲ့ အချိန်ရောက်လို့ ပိုက်ဆံများများရှိရင် ထမင်းပေါင်းစားတယ်။ ရေနည်းနည်းခမ်းနေရင် ... အကြော်ဝယ်စားတယ်။ ဖြစ်သလိုစားတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ ထမင်းချိုင့်ယူပြီး အလုပ်ဆင်းရတာလည်း အဆင်မပြေတော့၊ ကြုံသလိုစား ... ၀င်သလိုစား ... ဗိုက်ဝအောင်စား .... အရေးကြီးတာက ဗိုက်က ပြသနာမရှာဖို့ပဲ ..။ အဆင်ပြေတယ်။ ဘာမှမဖြစ်။ ကြုံသလိုစားတယ်၊ ဖြစ်သလိုစားတယ်။ ခရီးထွက်ရင် ဘာမှ ယူဆောင်သွားလေ့မရှိ။ ကြုံတဲ့အရပ်က ကြုံတာဝယ်စားတယ်။ (၀မ်းပျက်မယ်ထင်တဲ့ ယင်နားစာတော့ ရှောင်တယ်။ အများအားဖြင့် ရယ်ဒီမိတ် ပူတင်းပေါင်မုန့် .. အဲဒါမရှိရင် ငှက်ပျောသီး.. စတာတွေကို အစားများတယ်။)
ဒါပေမယ့် ... အချိန်ကာလ ရွေ့လျားလာတာနဲ့အမျှ အကျင့်နည်းနည်းပျက်သွားတယ်။ အခုဆိုရင် ဖြစ်သလို စားသောက်ရခြင်းကို သိပ်မနှစ်သက်တော့ပါဘူး။ လက်ရှိ ကျနော် အမဲသားမစားပါ။ ဟင်းထဲ အရွက်ထည့်ချက်ရင် မစားပါ။ ဒါဟာလည်း ပြောလို့ရလို့, လုပ်လို့ရလို့ လုပ်တဲ့ ကိစ္စလေးတစ်ခုပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြေးအိုးသွားသောက်တဲ့အခါ “အရွက်ထည့်တာ”ကို လုံးဝ (လုံးဝ) မစားပါ။ ငါးဟင်းချက်လို့ ပင်စိမ်း (သို့) နံနံပင် ထည့်လည်း မစားပါ။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲစားတဲ့အခါ “ကြက်သွန်မြိတ်”ထည့်ရင် မစားပါ။ ဆိတ်သားဟင်းချက်တဲ့အခါ ဆီသတ်ရွက်ထည့်တာ မစားပါ။ တို့ဟူးသုတ် စားတဲ့အခါ ရှောက်ရွက်ထည့်မစားပါ။ အဲ ... ကွေ့သယိုအပြုတ်စားတဲ့အခါတော့ ပဲပင်ပေါက် ထည့်စားတယ်။ ယိုးဒယားကွေ့သယိုအပြုတ် (အသုတ်ကိုတော့ သိပ်မကြိုက်ပါ) မှာထည့်တဲ့ ပဲပင်ပေါက်ကတော့ စံပါပဲဗျာ ..။ တော်တော်ကြီးတဲ့ ပဲပင်ပေါက်တွေ .. မယုံရင် ညီတော်မောင်မျိုး ကိုမေးကြည့်။
ကျနော့အကျင့်ကတစ်မျိုးဗျ ....၊ အဲဒီလို အရွက်တာရှောင်တာ နံနံပင် တို့စားတယ်။ ရှောက်ရွက် တို့စားတယ်။ အရွက်ကိုမကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ ဟင်းထဲ ထည့်ချက်ရင် အဲဒီအရွက်က ထွက်လာတဲ့ စိမ်းရွှေရွှေအနံ့ကို မကြိုက်တာ။
ဒါကလည်း အမေအိမ်သွားတဲ့အခါ၊ အိမ်သူသက်ထား ချက်ကျွေးတဲ့အခါ၊ ဆိုင်မှာ ၀ယ်စားတဲ့အခါ ဂျီးများလို့ရလို့ ဂျီးများတာ ထင်ပါတယ်။ တခါတရံ မလွှဲမရှောင်သာ အလှူအိမ်မှာ ဒီလိုမျိုးချက်ထားတဲ့အခါ စားလိုက်ရတာပဲ။ နည်းနည်းတော့ အောင့်သက်သက်ပေါ့။ အမျိုးသမီးရဲ့ မျက်စောင်းကိုလည်း ရင်မဆိုင်ရဲတာနဲ့ လိမ့်ပိတ်မျိုချ ရတာပေါ့ဗျာ ....။
ကဲ .... နန်းညီရေ ... TAG ထားတာနဲ့ ... ဖြေလိုက်တာ တမျိုးစီ ဖြစ်နေရင်လည်း ဆောရီးဗျာ ...။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ3း:51 PM6ထင်မြင်ချက်(များ)
အကောင်းဆုံးနေ့ .................. ဒီနေ့
အသိဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ..................... မြတ်စွာဘုရား
အကြီးဆုံးအရာ ..................... မေတ္တာ
အကြီးကျယ်ဆုံးအချိန် ............. သေခြင်း
အကြီးဆုံးအဟန့်အတား .......... အကြောက်တရား
အလွယ်ဆုံးအလုပ် ................. တဖက်သားကို အပြစ်ရှာခြင်း
အသုံးမကျဆုံးပိုင်ဆိုင်မှု ........... မာန
အကြီးဆုံးပိတ်ဆို့မှု ................. အတ္တ
အကြီးဆုံးအမှား .................... လက်လျှော့အရှုံးပေးခြင်း
စိတ်ချမ်းသာစရာအကောင်းဆုံး .. အလုပ်တစ်ခုကို ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်
အငြင်းပွားရဆုံးလူ .................. အမြဲတမ်းညည်းတွားနေတဲ့သူ
အဆိုးဆုံးဆင်းရဲမှု ................... စိတ်မပါ၊ လက်မပါဖြစ်ခြင်း
အလိုအပ်ဆုံး ......................... အများတွေးသလို မြင်သလို တွေးတတ်, မြင်တတ်မှု
အညံ့ဖျင်းဆုံးစိတ်ထား .............. သူတစ်ပါးကောင်းစားတာကို မနာလိုခြင်း
အကောင်းဆုံးလက်ဆောင် ........ ခွင့်လွှတ်ခြင်း
အကောင်းဆုံးအချိန် ................ လက်ရှိအချိန်
မှတ်ချက် --- အိမ်, ဆိုင်, ကား စသည်တို့မှာ ချိတ်ဖို့ လမ်းဘေးမှာချရောင်းတဲ့ဆောင်ပုဒ် စာရွက်ကလေးမှ တဆင့် ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား5:38 PM2ထင်မြင်ချက်(များ)
အညွှန်း : သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ပီတိ တစ်ထုပ်ရယ် ... ငါးတစ်ကောင်ရယ် ... ကိုရုပ်ဆိုးရယ်
ကျနော့ သူငယ်ချင်းများရဲ့ ပို့သတဲ့မေတ္တာကြောင့် ကိုရုပ်ဆိုးတစ်ယောက် လမ်းခရီးချော့မွေ့စွာနဲ့ ရန်ကုန်သို့ ကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီခင်ဗျား ...။
အားလုံးရဲ့မျက်စိထဲ ခရီးစဉ်လေးကိုမြင်သာ ထင်သာဖြစ်သွားအောင် ကျနော်ပြောပြမယ်။ စနေနေ့ (၀၄-အောက်တိုဘာ-၀၈)က ကျနော် မနက် ၅း၀၀နာရီလောက် အိပ်ယာကထပြီး၊ ၀၅း၄၅မိနစ်မှာ Bus ကားစီးပြီး ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းကိုသွားတယ်။ ၀၆း၀၀နာရီမှာ ဖယ်ရီဘုတ် (ရန်ကုန်-ဒလ)က စထွက်ပြီး ၁၀မိနစ်လောက်စီးပြီးတာနဲ့ ဒလဘက်ကမ်းရောက်သွားတာ။ အဲဒီမှာပဲ မနက်စာကို ထမင်းကြော်နဲ့ လဘ္ကက်ရည်တစ်ခွက် စားသောက်ပြီး၊ ၀၆း၄၅ လောက်မျာ ကျနော် လိုင်းကား (ဗန်ကား)နဲ့ ဒေးဒရဲကို သွားတာ။ ကားခက တစ်ယောက်ကို ခေါင်းခန်း ၄၀၀၀ကျပ်၊ အလယ်ခန်း ၃၀၀၀ကျပ်၊ နောက်ခန်း ၂၀၀၀ကျပ်နှုံးဗျ။ လမ်းမှာ တွံတေး၊ ကော့မှုး၊ ကွမ်းခြံကုန်းစတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းပိုင်မြို့နယ်တွေကိုဖြတ်သွားပြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းကို ဆက်စပ်ပေးထားတဲ့ ဒေးဒရဲတံတားကို ကျော်ဖြတ်ပြီး မနက် ၈း၃၀ လောက်မှာ ဒေးဒရဲကို ရောက်တယ်။ အခု လမ်းတွေက တစ်ခါသွား တစ်ခါဆိုးနဲ့ ကြုံနေရတယ်။ မိုးတွင်းဆိုတော့ ချိုင့်တွေအကြီးကြီးပဲ၊ ပုံမှန် လိုင်းကားတွေ ရန်ကုန်-ဒလကို ၁-နာရီ ၁၅မိနစ်မောင်းတာ အခု ၁-နာရီ ၄၅-မိနစ်လောက်မောင်းရတယ်။ ကျနော် ဒေးဒရဲရောက်တော့ ဆိုက်ကားနဲ့ သစ်ဆိုင်တွေကိုသွား အရင်ကျန်ရှိတဲ့ ငွေတွေကိုချေ၊ နောက်ဝယ်မယ့်သစ်စာရင်းတွေလုပ်နဲ့ ၁၀နာရီ ကျော်ကျော်လောက်မှာ ရွာကလာကြိုတဲ့လှေရောက်လာတာနဲ့ ရွာကိုသွားတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၄၅-မိနစ် သို့ ၁-နာရီလောက် မြစ်ကြောင်းအတိုင်းသွားရတယ်။ ရေတက်၊ ရေကျပေါ်မူတည်တာပေါ့။ ရာသီဥတုကတော့ သာယာလျက်ပါပဲ။ ရွာကိုရောက်ရောက်ချင်း သူတို့ဆောက်လုပ်နေတဲ့ လှေဆိပ်နဲ့ နားနေဆောင်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်၊ အဲဒီကလူတွေနဲ့ စကားစမြည်ပြောပြီး ရွာထဲကို သဲအိတ်တွေခင်းထားတဲ့ တာရိုးပေါ်ကနေ လမ်းလျှောက်ဝင်သွားတာပေါ့။ တွေ့သမျှလူတွေ၊ အိမ်တွေကို အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်ပြီးပေါ့။
ကျနော်တို့သွားတိုင်း အမြဲတမ်းတည်ခိုနေကျအိမ်လေးကိုရောက်တော့ လှေ ၂-စီးတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ လိုအပ်တာလေးတွေကို ရွာကလူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးကြတယ်။ ပြီးတော့ နောက်ထပ် လှေ လိုအပ်တဲ့လူတွေစာရင်းကိုလည်း တစ်ခါတည်း မှတ်ခဲ့လိုက်တယ်။ နောက်အလှူရှင်တွေရလာတဲ့အခါ သူတို့ကို လှူအုံးမလို့။ လှေတစ်စီးက သစ်ဖိုးနဲ့ လက်ခပေါင်း ၂သိန်းခွဲလောက်ကုန်မှာ၊ တပ်မယ့်အင်ဂျင်ရယ်၊ ရှပ်တန်း+အထိုင်ရယ်က ၂ သိန်းကျော်ကျော်လောက်ကုန်မှာ။ ဆောက်မယ့် လှေပုံစံက အောက်က ဓါတ်ပုံထဲက အလယ်ကလှေလေးအတိုင်းပါ။ ၁၈ ပေအရှည်၊ လှေဝမ်းအကျယ်က ၂ပေ ၇လက္မ၊ အပေါ်ဗျက်အကျယ်က ၃ပေခွဲ ရှိတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် လူ ၈-ယောက်လောက် အသာလေးစီးလို့ရတယ်။ ဆန်အိတ်ဝန်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် တစ်တင်းခွဲအိတ် ၃၀ လောက် အသာလေးတင်လို့ရတယ်။
သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးအပြီးမှာ ... ရွာလယ်မှာရှိတဲ့ ဆောက်လက်စကျောင်းလေးကို ဓါတ်ပုံသွားရိုက်တယ်။ အမိုးရယ်၊ အခင်းရယ် ပြီးပြီ၊ အချောသတ်နေတာရယ်၊ ကာမယ့်ထရံကို ရွာသားတွေကိုယ်တိုင် ခရောင်းဝါးနဲ့ ရက်နေလို့ အပြီးမသတ်သေးတာ။ နောက်အပါတ်လောက်ဆိုရင် အလုံးစုံပြီးပြီ။ ကျောင်းရဲ့ပါတ်လည်မှာလည်း အရိပ်ရမယ့်အပင်တွေစိုက်ထားတယ်။
အဲ ... တစ်ခုပြောဖို့ ကျန်သေးတယ်။ ကျောင်းရှိရာကိုမသွားခင်၊ ထမင်းစားခဲ့သေးတယ်။ စားကောင်းတယ်ဗျ။ ဘဲဥမွကြော်ရယ်၊ ၀က်သားဟင်းရယ်၊ ငါးဒန်ဟင်းရယ်၊ ငပိရည် အတို့အမြုပ်နဲ့ပေါ့။ ထမင်းစားပြီးလို့ လေတဖြူးဖြူးနဲ့ မျက်လုံးက စင်းလာပေမယ့် အိပ်ဖို့အချိန်မရှိတော့တာကြောင့် ကမန်းကတန်းပဲ အထုပ်ဆွဲပြီးထွက်ရတာပေါ့။
ပြီးတော့ .... ဆရာမနဲ့ ကျောင်းသား/သူလေးတွေဆီကိုသွားပြီး၊ ၀ယ်လာတဲ့ မုန့်လေးတွေကို ဝေ၊ ပြီးတော့ သူတို့အားလုံးကို ဓါတ်ပုံရိုက်လာခဲ့တယ် (နောက်တစ်ခေါက်သွားမှ အဲဒီ ဓါတ်ပုံလေးကို ပေးရမယ်)။ ပြုံးပျော်နေတဲ့ ကလေးတွေကို စလိုက်၊ နောက်လိုက်နဲ့ သူတို့ ဘာတွေလိုအပ်သေးလဲလို့ မေးမြန်းတဲ့အခါ “ဗလာစာအုပ်ရယ်၊ ခဲတံရယ်၊ ပုံဆွဲစာအုပ်ရယ်”လိုတယ်တဲ့။ နောက်တစ်ခေါက် ဦး လာရင်၊ ၀ယ်လာခဲ့မယ်နော်ဆိုတော့ သံပြိုင်ပါပဲ “ဟုတ်”တဲ့။
ကျနော်လည်း အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်၊ လှေပေါ်တက်ပြီးရွာက ပြန်ထွက်တော့ ၂-နာရီ ကျော်နေပြီ။ ဒေးဒရဲရောက်တာနဲ့ “သမာဓိ”သစ်ဆိုင်ကိုဝင်၊ သစ်ဖိုးငွေရှင်း၊ သင်္ဃန်းသားသစ်တွေကိုစစ် (အမှန်က ကိုယ်လည်း သစ်အကြောင်း မသိ၊ နားလည်သလိုလိုနဲ့ ... အမ, သစ်တွေက အနာအဆာကင်းပစေနော်၊ လှေလုပ်မှာ အရေးကြီးတယ်၊ ရေလည်ကျမှ မြုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဗျ ... ဘာညာဆိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ဖြီးခဲ့တယ် ဘာရမလဲ ... ရုပ်ဆိုးပဲဟာ :)) ပြီးတော့ ဒေးဒရဲမြို့ထဲပါတ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အောက်ခံသုတ်ဆေး၊ မူလီ၊ ရေနံချည်း၊ ပွဲညှက် စတာတွေကိုဝယ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လိုအပ်မယ့် လက်သမားပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်း ၀ယ်ခဲ့ပေးသေးတယ်။ ဘော်ဒါနေတဲ့ ၁၀-တန်းကျောင်းသူလေးကို ဓါတ်ပုံသွားရိုက်မလို့ပါပဲ။ အချိန်ကလည်းနည်း၊ သွားရင်းလာရင်း ကားဂိတ်က ကားတစ်စီးက ကျနော့်ကို လိုက်ရှာနေတာတွေ့တာနဲ့ ရန်ကုန်ကို ပြန်လာခဲ့ရတယ်။
ဒေးဒရဲမှာက ညနေ ၃း၀၀နာရီဆိုရင် လိုင်းကားဂိတ်က ပိတ်ပြီ။ လူရမှ ကားထွက်တာ။ အဲဒီတုန်းက အချိန်က ၄း၀၀နာရီ၊ လူက ၃-ယောက်ကအသင့်စောင့်နေတယ်ဆိုတော့၊ ကားဆရာက ဒေးဒရဲမြို့ထဲမှာ ကျနော့ကို လိုက်ရှာတာ။ မနက်ကတည်းက ကျနော်ပါလာတာကို သိတဲ့ ကားသမားတစ်ယောက်က၊ အဲဒီလူ ဒီနေ့ ရန်ကုန်ပြန်မှာ ငါ, ဈေးထဲမှာ သူ့ကိုတွေ့လိုက်တယ်၊ သွားရှာဆိုလို့ ရောက်လာတာ။ ရုပ်ဆိုးတို့ ကံကောင်းချက်များ ... အပြန်ကားခကတော့ ခေါင်းခန်း ၆၀၀၀ကျပ်၊ အလယ်ခန်းကို ၅၀၀၀-ကျပ်နဲ့ စီးလာရတာ။ တစ်လမ်းလုံး မိုးတွေ သည်းချည်းမဲချည်း ရွာလိုက်တာဗျာ မပြောနဲ့တော့၊ ဒလ ဆိပ်ကမ်းကို ညနေ ၆-နာရီ ၁၅-မိနစ်မှရောက်တယ်။ မိုးအရမ်းရွာတော့ ကားဆရာကလည်း သိမ်းမမောင်းရဲဘူး။ လမ်းကကျဉ်း၊ လမ်းဘေးတစ်လျှောက် ရွာစဉ်ရှိနေတော့ ကားလမ်းပေါ် ကျွဲတက်၊ နွားတက်၊ ကလေးတွေ၊ ဆိုက်ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ဆိုတော့ ... အန္တာရယ်များတယ်ဗျ။
အပြန် ရွာက ငါးဒန်တစ်ကောင် လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ မနေ့က အဲဒီငါးကို အိမ်မှာချက်စားတယ်။ အဟဲ ... ကောင်းတယ်ဗျ။ အမျိုးသမီးကလည်း ဟင်းချက်ကောင်းဆိုတော့ (မယုံရင် ရွာသားလေးမေးကြည့်)၊ ထမင်းစားလိုက်၊ အိပ်လိုက်နဲ့ လူတောင် နည်းနည်းဝလာသလိုပဲ။
မှတ်ချက်။ ရွာကလူငယ်တွေ မအားတာနဲ့ (ငါးရှာ၊ လယ်လုပ်)နေကြတာနဲ့ သူတို့နဲ့ ဓါတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ရဘူးဗျ။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား1:05 PM7ထင်မြင်ချက်(များ)
အညွှန်း : ခရီးသွားမှတ်တမ်း, အလှူဒါန
ကဲ ... စာမေးပွဲပြီးပြီဆိုတော့ အလှူအတန်းကိစ္စလေးတွေ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ အလှည့်ကြလာပြီပေါ့ဗျာ။ မနက်ဖြန် ကျနော် ဒေးဒရဲ - ကွန်ဒိုင်းသွားမယ်။ အခုကိစ္စက လှေ တည်ဆောက်ပေးဖို့ကိစ္စ။ လက်ရှိတော့ များများမလှူနိုင်သေးဘူး။ ၂-စီးပဲ လှူဦးမှာ။ နောက်ထပ်အလှူရှင်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
၁၈-ပေအရှည် လှေတစ်စီး (၆.၅ အင်ဂျင်)နဲ့ တစ်စီးကို လေးသိန်းခွဲ / ငါးသိန်းလောက် ကုန်ကျမယ်။ သင်္ဃန်းသား/တောင်ပိန်းရယ်၊ ပျဉ်းကတိုးရယ် ရောစပ်ပြီးလုပ်မှာ။ ဆောက်မယ့် လက်သမားဆရာကလည်း ရွာမှာ အသင့်ရှိတော့ သိပ်မခက်ဖူး။ မနက်ဖြန် ဒေးဒရဲမှာ သစ်ဝယ်ပေးမယ်၊ သံဝယ်ပေးမယ်၊ ရေနံချေးဝယ်မယ်၊ တခြားလိုအပ်တာလေးတွေကောပေါ့။ ပြီးမှ ရွာကို သစ်တစ်ခါတည်းသယ်သွားမယ်။
ဟိုရောက်ရင် စာသင်ကျောင်း လက်စ သတ်ထားတာကိုကြည့်မယ်။ ရွာလည်လမ်းမ ဖောက်ထားတာ၊ လှေဆိပ်တည်ဆောက်မယ့်နေရာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်လုပ်မယ့်နေရာ၊ ကျောင်းသား/သူလေးတွေကို သွားတွေ့မယ်၊ ဆရာမ ဘာလိုလည်း သွားမေးမယ်။ အာ ... ကလေးတွေအတွက် မုန့်ဝယ်သွားရမယ် :) သူတို့လေးတွေ လာမယ့်နှစ်မှာ စတင်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားရမယ့် ကျောင်းအသစ်ရှေ့မှာ ဓါတ်ပုံခေါ်ရိုက်ပေးလိုက်ဦးမယ်။ နဂိုသွားတုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ဝေပေးရအုံးမယ်။
ရွာက ကာလသားတွေအတွက် ၀ယ်ပေးထားတဲ့ နိုင်ငံခြားဖြစ်ဘောလုံးအသစ် ၂-လုံးနဲ့ သူတို့ကို ဓါတ်ပုံပေးရိုက်လိုက်ဦးမယ်။ (သူတို့က မှော်ဘီဘောလုံးအစား နိုင်ငံခြားဖြစ်လေးများ ဖြစ်နိုင်ရင် ၀ယ်ပေးပါလားလို့ ပူဆာနေတာကြာပြီ၊ ကိုယ်လည်း မရောက်ဖြစ်တာ ကြာပြီကိုး၊ စပါးရိတ်သိမ်းပြီးမှ ရွာသားနဲ့ ရန်ကုန်သား ဘောလုံးချိန်းပွဲလည်းရှိတယ်။) ရွာရဲ့ တိုးတက်လာတာလေးတွေကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ရဦးမယ်။ ကာလသားတွေနဲ့လည်း စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောရမယ်။ မသွားဖြစ်တဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ ပြောင်းလဲမှုကတော့ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ အဖွားအိုတစ်ယောက် ကွယ်လွန်သွားတာ။ အသုဘပို့မသွားလိုက်ရဘူး အဲဒီနေ့က စာမေးပွဲဖြေနေတုန်းမို့လို့ :( ကျနော်တို့သွားတိုင်း အဲဒီအဖွားက အမြဲတမ်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောနေကျ။ ဟဲ့ ထမင်းထည့်စားပါအုံး၊ စားမကောင်းလို့လားလို့ မေးမယ့်လူတစ်ယောက်တော့ လျော့သွားတာ စိတ်မကောင်းဘူး။
အပြန်တော့ စောစောပြန်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ ဒေးဒရဲမှာ ကျောင်းထားပေးထားတဲ့ ၁၀-တန်းကျောင်းသူကလေးကိုလည်း ၀င်တွေ့ရဦးမယ်။ ဒေးဒရဲ - ရန်ကုန်ကားတွေက ညနေ ၃း၃၀ နောက်ဆုံးဆိုတော့ စောစောပြန်နိုင်မှ အဆင်ပြေမှာ။ ဒီတစ်ခေါက် သွားမှာက ကျနော် တစ်ယောက်တည်းပါ။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား12:21 PM6ထင်မြင်ချက်(များ)
အညွှန်း : အလှူဒါန
Forward Email လေးက ရတာပါ။ Don't be angry တဲ့။ မူရင်းအတိုင်း တင်ပေးလိုက်တယ်။
ဒီစာလေး ဖတ်ပေးပါအုံး.... သိပ်ကောင်းတဲ့ စာလေးပါ....သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကရတာပါ... ဒီစာလေးဖတ်ပြီ ဒဏ်ရာတွေများရှိနေလို့ ပျောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်..............
ဒီစာလေးကို ကျေးဇူးပြုပြီ ဆုံးအောင်ဖတ်ပေးပါ..........
အဆုံးမှာ ကောင်လေးဟာ စိတ်မတိုပဲနေနိူင်တဲ့နေကို ရောက်လာရော။ ကောင်လေးကပြေးပြီး သူအဖေကို သတင်းသွားပို့တယ်.. အဖေရေ.. သားတော့ စိတ်ကို ထိန်းနိုင်သွားပြီဗျ..
အဲ့ဒီလိုကျတော့ သူအဖေက တစ်မျိုးခိုင်းပြန်ရော.. မင်းကိုယ်မင်း ဒေါသမဖြစ်အောင် တစ်နေကုန်ထိန်းနိူင်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီသံတွေကို ပြန်နှုတ်ဦးကွာ။ တစ်နေ့ ထိန်း နိူင်ရင် ညအိပ်ခါနီး တစ်ချောင်းနှုန်းနဲ့ နှုတ်နော်လို့ မှာလိုက်သတဲ့။ ရက်တွေကြာလာတော့ ကောင်လေးက သူအဖေကို ပြောနိူင်သွားတယ်။ အဖေရေ.. သားရိုက်ခဲ့တဲ့ သံတွေအားလုံးကို နှုတ်ပြီး သွားပြီ တစ်ချောင်းမှ မကျန်တော့ဘူး။
သည်အခါအဖေလုပ်တဲ့သူက သားရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီး သားရိုက်ခဲ့တဲ့ဝင်းထရံဆီကို ခေါ်သွားတယ်။ တော်တယ်ငါ့သား လို့လည်းဆိုတယ်။ ဒါပေမယ့် သား သေချာကြည့်စမ်း။ ၀င်းထရံတိုင်မှာ အပေါက်တွေဖြစ်ကျန်ခဲ့တယ်နော်။ ဒီဝင်းထရံတိုင်တွေက အရင်တုန်းကလို ချောချောမွေ့မွေ့မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတာ သားမြင်တယ် မဟုတ်လား။ အေး.. သားကစိတ်တိုတိုနဲ့ ပါးစပ်ကပြောချလိုက်တဲ့အခါ တစ်ဖက်သားဆိုတဲ့ဝင်းထရံတိုင်မှာ အခုလိုအမာရွတ်တွေထင်ကျန်ရစ်ခဲ့တတ်တယ် သားရယ်။
တကယ်တော့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ အဖိုးတန်တဲ့ရတနာတွေပါပဲ။ သူတို့ဟာ ငါတို့တွေကို ပျော်ရွှင်ရယ်မောစေတယ်။ အားပေးကူညီတယ်။ ဒုက္ခ၊သုခတွေကိုလည်း မျှဝေခံစားကြတယ်။ ရင်ဖွင့်သမျှကို ဂရုစိုက်နားထောင်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ခုခုဆိုစိတ်လိုက်မာန်ပါမလုပ်နဲ့။ သူတို့ကိုသံနှုတ်ရာကျန်ခဲ့တဲ့ ၀င်းထရံတွေအဖြစ်မရောက်ပါစေနဲ့။
ကိုယ့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို ကိုယ်က ဘယ်လောက်ဂရုစိုက်ကြောင်း သူတို့ကိုလည်း သူတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေအပေါ် ဂရုစိုက်လာအောင်လုပ်ပေးသင့်ကြောင်းပြောကြားပေးပါ။ ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်က သူငယ်ချင်းကောင်း မိတ်ဆွေကောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေဆီကို ဒီပုံပြင်လေးကို လက်ဆင့်ကမ်းပါ။ ယုတ်စွဆုံး ဒီစာလေးကို ပို့လိုက်တဲ့သူဆီ ဒီအတိုင်းပြန်ပို့နိူင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့စာ ကိုယ့်ဆီ ပြန်ရောက်လာရင် ကိုယ့်မှာ မိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိနေတာကို အလိုလိုခံစားနိုင်မှာပါ။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား2:06 PM6ထင်မြင်ချက်(များ)